Himilada Motorola One waxay ku socotaa Geekbench oo ay weheliso Exynos 9610 | Androidsis
Ayaa u muuqday a taleefan cusub oo Motorola ah oo ku suntan "Motorola One Vision" dusha sare ee loo yaqaan 'Geekbench benchmarking platform'. Midkani wuxuu la imaan doonaa a Samsung Exynos 9610 chipset, sidaas darteed waxay noqon doontaa noocii ugu horreeyay ee shirkadda lagu qalabeeyo xirmooyinka noocaas ah.
Ma aha telefoonno badan oo dhinac saddexaad ah oo isticmaala processor Samsung. In yar oo ka mid ah Meizu's waxaa ku shaqeeya Exynos SoCs. Moodelladan waxaa ku soo biiri doona terminal-kan soo socda, kaasoo sidoo kale loo yaqaan lahaa Motorola P40.
Liiska Geekbench ee Motorola One Vision ayaa muujinaya taas wuxuu ku socdaa nidaamka qalliinka Android 9 Pie. Sidoo kale, sidaan horeyba u sheegnay, waxaa ku shaqeeya Exynos 9610, oo ah sideed-core chipset oo si wadajir ah ula shaqeyn doona 6 GB oo RAM ah qaabkan. Imtixaanada hal-xudunta ah iyo kuwa badan, Motorola One Vision waxay kala heleen 1,599 iyo 5,328 dhibcood siday u kala horreeyaan.
Motorola One Vision on Geekbench kahor shaacinta iyo soosaarida rasmiga ah
Xanta hore ee ku saabsan taleefanka casriga ee soo socda ee Motorola P40 ayaa shaaca ka qaaday inuu ku imaan doono a Snapdragon 675 chipset. Si kastaba ha noqotee, bishii hore, bogga 91 Mobilada ayaa sheegay in taleefanku ka muuqan doono Exynos 9610. Daabacaadda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday ku iman lahaa saddex daabacadood, kaasoo noqon lahaa 3 GB oo RAM ah + 32 GB oo keyd ah, 4 RAM + 64 GB oo keyd ah iyo 4 GB oo RAM ah + 128 GB oo keyd ah.
Liiska Geekbench ee dhowaan la ogaaday waxaa iska leh taleefanka soo socda Motorola P40. Exynos 9610 oo wadi doona taleefanka P40 ayaa sidoo kale awooda Samsung Galaxy A50 dhawaan la sii daayay.
Motorola P40 ayaa la filayaa inuu beddelo taleefanka Motorola P30, mobiil la socda Android One iyo kii ugu horreeyay ee shirkadda leh shaashad shaashaddeeda ah oo la bilaabay sanadkii hore. Haatan warbixinnadii ugu dambeeyay ayaa shaaca ka qaaday taas Waxay imaan doontaa iyada oo ah taleefankii ugu horreeyay ee Motorola oo leh shaashad daloola, waxay la imaan kartaa 48 megapixel + 5 megapixel laba qaabeyn oo kameero ah waxayna leedahay batari 3,500 mAh iyo taageero NFC. Ma jiro weli wax macluumaad ah oo ku saabsan taariikhda bilawga casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Motorola One Vision waxay ku dalxiis tagtaa Geekbench oo ay weheliso Exynos 9610
Sida loo abuuro isku xirka VPN taleefankaaga casriga ah ee Android